Banyere Anyị - Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd
Pụrụ iche na Ductile Iron Grooved Pipe Fittings na njikọ maka ọgụ ọkụ
Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd, nke hibere na 2007, bụ ọkachamara na Ductile Iron Grooved Pipe Fittings na njikọta maka ịlụ ọgụ ọkụ. Ọ dị na “World kite Capital” Weifang City nke a na -akpọ ntọala nrụpụta ọkpọkọ China Grooved na n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao.
Ụlọ ọrụ Guzosiri ike
Talent Pụrụ Iche
Zhihua agabigala sistemụ njikwa mma ISO9001 yana ngwaahịa ya dị warara enwetala nkwado FM & U L & CE maka ndị ahịa OEM / ODM. N'oge a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ anọ nwere ndị ọrụ nka 1000 na ụdị abụọ:WFHSH ® ™ & FANGAN ® ™ & SHUNAN® ™, na -ekpuchi mpaghara nke mita 100000.
Innovation anaghị akwụsị akwụsị, nyocha na mmepe anaghị akwụsị akwụsị.
Zhihua bụ onye ama ama na nnukwu aha n'etiti ndị ahịa maka okwukwe ya, ịdị mma ya, ọnụ ahịa ya na ọrụ ya. Ngwa ahịa ya dị warara na -ere ihe karịrị obodo 300 na China wee bupụ ya na United State, Middle East, South America, Southeast, Korea, Europe Ect.
Zhihua nwere anọ isi mmepụta ogbako maka mgbatị ngwaahịa: Auto-mgbatị ogbako, Machining ogbako, sere ogbako na ịkpụzi omumuihe. Ụlọ ọrụ Zhihua nwere akụrụngwa na akụrụngwa kachasị elu na ụlọ ọrụ. Isi ụlọ ọrụ mmepụta nwere ahịrị mmepụta 8 kwụ ọtọ 416; France FONDARC 180T igwekota igwe na -akpaghị aka, nke bụ ndị na -agwakọta kacha mma n'ụwa niile. 6 Ọkụ eletriki ọkara, 8 CNC ịkpụzi igwe, 150 CNC lathes maka Eriri & Groove, ahịrị mkpuchi elektrọnik abụọ, 5 akpaaka epoxy & eserese igwe, nke ikike kwa afọ karịrị 100000 tọn.
Na 2019, Zhihua enwela ụlọ nrụpụta ọkụ ọkụ ọhụrụ, nke nwere ike imepụta ihe ọkụ ọkụ nde 4 kwa afọ, ngụkọta ego ha karịrị nde RMB nde 20, nke na -emepụta ihe na -emenyụ ọkụ, obere ọkụ ọkụ carbon dioxide na ngwaahịa ndị ọzọ. Zhuhua ga -etolite n'ime ụlọ ọrụ buru ibu nke nwere ngwaahịa nchekwa ọkụ zuru oke n'ọdịnihu dị nso.
Ọtụtụ ihe nwere ike gbanwee, mana ntinye anyị na aka ọrụ, ịdị mma na ọrụ ndị ahịa agaghị. Kpọtụrụ Zhihua ka ịmalite ịchekwa oge na ọnụ ahịa ya.